रञ्जु दर्शनालाई ११ अभियाेग ?
'भुराभुरी भनेर पार्टीमा अपमानित गरे, प्यारप्यार बोली भनेर बैठकमा हप्काए '
फाल्गुन १८, २०७५ एजेन्सी
स्थानीय तहको निर्वाचन ०७४ वैशाख ५ गते उम्मेदवारी दिएपछि मात्रै म राजनीतिमा लागेको होइन । ०७० को असोज÷कात्तिकदेखि नै म सक्रिय राजनीतिमा छु । यो आरोप यहीँबाट क्लियर गर्दै जाऊँ । म राजनीतिमा लाग्नुको पछाडि केही सामान्य कारण छन् । मेरी हजुरआमाको पालामा पनि नेपाल विकासोन्मुख देश थियो, मेरी आमाको पालामा पनि विकासोन्मुख देश नै थियो । म सानो हुँदाखेरि सामाजिक शिक्षा पढ्दै गर्दाखेरि पनि नेपाल विकासोन्मुख देश हो भनेरै थाहा पाइयो । अहिले मेरा सहपाठीहरू जसले विवाह गरिसके, उनका नानीहरूले पनि त्यही कुरा पढ्दै छन् ।
०७४ को स्थानीय चुनाव म जन्मेपछि भएको दोस्रो स्थानीय निर्वाचन थियो । पहिलो निर्वाचनका वेला त म भर्खर बामे सर्दै थिएँ । २० वर्षसम्म स्थानीय चुनाव भएन, त्यसमा म र मेरो पुस्ताको गल्ती छैन । हामी हुर्किँदै गर्दाखेरि कहिले पनि ठेलमठेल नभएको गाडी पनि हुन सक्छ भनेर सपना पनि देख्न सकेका थिएनौँ । ट्राफिक जाम भनेको हाम्रो नियति नै हो, यसलाई भोग्नैपर्छ भनेर हुर्कियौँ । अहिलेसम्म धेरैजनाको दिमागमा त्यही छ । तर, यी सबै गलत कुरा हुन् । यस्ता कुराहरू त स्थानीय सरकारले गर्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो । स्थानीय सरकारका बारेमा अध्ययन नै नगरीकन पनि हामीहरू आएका होइनौँ । म र मेरा साथीहरू ‘स्थानीय सरकार भनेको कार्यकारी हो, यसले गर्न सक्ने धेरै कामहरू छन्, कमसेकम आफ्नो सहर–गाउँसम्म त बदल्न सकिन्छ’ भनेरै चुनावमा आएका हौँ । हो, सम्पूर्ण कुराहरू हामीले भनेका मात्रै ठीक छन् वा हामीले मात्रै बुझेका छौँ भनेरचाहिँ म ठोकुवा गर्दिनँ । हरेक दिन नयाँ अध्ययन गर्दै÷सिक्दै जानुपर्छ ।
निर्वाचनमा किशोर थापाजीको र मेरो भोटको आधारमा ‘अब एकीकरण हुनैपर्छ, दुईवटा दल राख्नुहुन्न’लगायतका कुराहरू आए । हामीले आकलन गरेनौँ कि कस्ता व्यक्तिहरूबाट त्यस्तो सुझाब आयो भन्ने । एकदमै विश्लेषण गर्ने व्यक्तिहरूबाट आयो कि सतही कुरा गर्नेहरूबाट आयो भन्ने हामीले हेरेनौँ वा बुझेनौँ । हामीलाई पनि विज्ञता भएका व्यक्तिहरू आउनुभयो भने धेरै सिक्छौँ भन्ने थियो ।
हामी जसरी भनिरहेका छौँ, त्यसले समग्र मुद्दालाई नै हल्का बनाइरहेको छ । गोविन्द केसीले जुन अभियान चलाए, त्यो एक महिना चलाएर छाडेका होइनन् । उनी लगातार यो अभियान चलाइरहेका छन् । डा. केसी मात्रै होइन, सामान्य नागरिक वा अन्य कुनै पार्टीकै नेताले पनि एउटा क्षेत्रकै परिवर्तन गर्नका लागि मुद्दा उठाउँथ्यो भने हामी त्यसलाई पनि सहयोग गर्थ्यौ । डा. केसी एकजना व्यक्तिलाई मात्र हामीले हेर्न हुँदैन, मुद्दालाई हेर्नुपर्छ । मेरी आमा शिक्षण अस्पतालमा भर्ना हुँदा मैले त्यहाँ जे–जस्ता दृश्य देखेँ, त्यसले पोलेर म केसीको अभियानमा लागेकी हुँ । डा. केसीबाहेक अरूले त्यो मुद्दा त्यसरी उठाउन पनि सक्दैनथे ।
विवेकशील नेपालीको आफ्नो सिर्जनात्मक अभियान छैन, पहिचान भएन भन्ने कुरामा पनि मेरो फरक मत छ । हामीले जे अभियानहरू गर्‍यौँ, त्यो प्रकाशमा आएनन् । त्यही भएर जनताले नजिकबाट देख्न र जान्न पाउनुभएन । ‘नेपाल खुला छ’ भन्ने अभियान हामी अहिले पनि वेलावेलामा गरिरहेका हुन्छौँ । ‘नेपाल बन्दले देश बन्दैन’ भन्ने अभियानको सन्देश हो । बन्दले देश चल्दैन । खुला भए पो अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुन्छ, अर्थतन्त्र नै चलायमान भएन भने गरिब देशलाई झन गरिब बनाउने काम मात्रै हुन्छ । अर्को कुरा उद्यमशील समाज भनेको के हो ? उद्यमी भनेका कस्ता हुन्छन् ? उद्यमीहरूलाई केकस्तो गाह्रो/अप्ठ्यारो पर्छ ? तिनलाई कसरी चिर्ने भन्ने अभियान पनि विवेकशील नेपालीले चलाएको हो । मलाई यी सिर्जनात्मक अभियान नै हुन् भन्ने लाग्छ । तर, यो कुरा जनतालाई बुझाउन सकेका छैनौँ वा जनतामाझ पुगेका छैनन् । त्यसकारण डा.गोविन्द केसीको मुद्दा मात्रै होइन, अरू सिर्जनात्मक मुद्दा पनि हामीले उठाएका छौँ । केसीको मुद्दालाई आफू बलियो भएर, आँट गरेर उठाउनका लागि मात्रै हामीले मद्दत गरेको हो । मद्दत गर्दै गर्दा हामी पनि चिनियौँ ।
पार्टीमा विवाद हुँदै गर्दा मैले एकताको विगुल फुक्दै साथीहरूलाई ‘त्यस्तो हुन दिनुहुन्न, हामी एक हौँ’ भन्दै एकीकृत राख्नका लागि पहल गरेँ । त्यसरी हिँड्दाहिंँड्दै पनि पर्दापछाडि अनेकौँ तिगडम भए । ती तिगडमहरूलाई आत्मसात् गर्दै, अंगीकार गर्दै, यही सुसंस्कृत राजनीति हो भन्दै, त्यसमै स्टाम्प लगाउँदै हिँड्न त रञ्जु राजनीतिमा आएकी होइन नि । रञ्जुको क्यारेक्टर पनि त्यो होइन । सहनुको पनि एउट सीमा हुन्छ । मलाई के लाग्छ भने यो संघर्षपछि आएको रूपान्तरण हो । यसले केही न केही नतिजा दिएरै छाड्छ ।
त्यो विभाजन जरुरी थियो । कुनै पनि कुरा गहिराइमा पुगेर हेर्‍यो भने त्यसका अनेकौँ पाटाहरू देखिन्छन् । असली रूप देखिन्छन् । र, जरासम्मै पुग्न सकियो भने समस्याको समाधान पनि निस्कन्छ । विवेकशील नेपाली र साझा पार्टी एकीकरण हुँदाताका हामीले ‘सुसंस्कृत राजनीति हुन्छ, सहभागितामूलक राजनीति हुन्छ, युवामैत्री पार्टी बन्छ, महिलामैत्री पार्टी हुन्छ’लगायतका अनेकौँ प्रतिबद्धताहरू गरेका थियौँ । १७ महिनाको दौरानमा एकीकृत पार्टीभित्र के–के भयो भन्ने कुरा बाहिर सबैलाई थाहा हुँदैन । जनताले बाहिर देख्ने भनेको एक दिन पार्टी फुटेको मात्रै हो । भित्रका अनेकौँ कुराहरू हामीले देखाउन सक्दैनौँ, देखाउन मिल्दैन पनि । त्यो राजनीतिक संस्कार हो । म अहिले पनि कतिपय आन्तरिक कुराहरू भन्दिनँ । उमेरले आलोकाँचो भए पनि मैले राजनीतिमा थुप्रै अनुभव बटुलिसकेकी छु । त्यो अनुभवलाई ‘जिरो हो, त्यसको मूल्य राख्दैनौँ’ भनेर पनि मर्यादामै प्रहार गर्ने काम भएको छ । त्यो क–कसले गर्‍यो भन्ने कुरा म भन्दिनँ । तर, आन्तरिक संघर्ष नभइकन यी कुराहरू भएका पनि होइनन् ।
जुन उद्देश्यले पार्टी एकीकरण भएको थियो, त्यो उद्देश्य परिपूर्ति नहुने देखिसकेपछि विवेकशील नेपालीले कम्तीमा जे सुरु गरेको थियो, त्यसलाई त निरन्तरता दिनुपथ्र्यो । धेरै समयपछि धोखा दिनुहुन्न । अहिले जे छ, त्यो निकालिदिनुपर्छ । यो कुरा चुनावकै संघारमा पनि हुन सक्थ्यो । तर, त्यो झन ठूलो घात हुने थियो । घात गर्नुहुन्न भनेरै पर्खेको हो । पार्टी फुटे पनि साझाका साथीहरूसँग सौहार्दतापूर्वक कुरा हुन्छ । उहाँहरूले गर्नुभएका कार्यक्रमहरू हेर्छौँ । सामाजिक सञ्जालमा लाइक गर्ने, सेयर गर्ने पनि गरिरहेका छौँ । यो राजनीतिक संस्कार कायम राखेका छौँ । तर, जसरी काम गरिनुपथ्र्यो, गरिन सकिन्थ्यो त्यो हुनै सकेन र अब भविष्यमा पनि हुँदैन भन्ने खुलस्त केही प्रमाणहरू आइसकेपछि अब यसरी यही संगठनमा बस्न मिल्दैन भन्ने भयो । र, पुनः जागृत भएर आयौँ । ०६९ सालदेखि विवेकशील नेपाली जुन थियो, त्यही विवेकशील तर परिस्कृत भयो । किनभने, अनुभव र चोटले धेरै सिकायो ।
शनिवार, फाल्गुन १८, २०७५, ०७:०३:००
ज्योति जङ्गललाई ७ प्रश्न कहिलेकाहीँ किताबको बोक्रो सुन्दर लाग्छ, विज्ञापन झन् दमदार हुन्छ तर शब्दहरुले अलिनो भाषा बोलिरहेका भेटिन्छन् ।